MPIKAMBANANA SASANY EO AMIN’NY UCTU : Antsojay no andraisan’izy ireo ny ataon’ny fanjakana sy ny ATT | NewsMada
MPIKAMBANANA SASANY EO AMIN’NY UCTU : Antsojay no andraisan’izy ireo ny ataon’ny fanjakana sy ny ATT
Par Freenews sur 14/02/2017
Maro amin’ireo kaoperativa mampitohy ny renivohitra sy faritra ivelany no tsy manaiky ny hampidina ny saran-dàlana fa mitazona izany ho 500 ariary amin’izao fotoana izao. Na dia nisy aza ireny fanapahan-kevitra noraisin’ny fitondram-panjakana ireny dia tsy niverin-dàlana izy ireo fa nitazona io saran-dàlana niakatra io.
« Antsojay no handraisanay ny fanapahan-kevitry ny fanjakana sy ny ATT (agence de transport terrestre) fa tsy marimaritra iraisana. Raha tena hitady vahaolana dia izay fifanarahana no atao fa tsy mametraka baiko be toa io nataon’izy ireo io », hoy ny nambaran’ny mpikambana eo anivon’ny kaoperativa mivondrona ao anatin’ny UCTU, tsy nety nitonona anarana.
Araka izany, mipoitra amin’izao fotoana izao fa vahaolana vonjitavanandro ihany io noraisin’ny fitondram-panjakana amin’ny famoahana ny fanampiana manokana io na dia efa filan-kevitry ny minisitra manokana mihitsy aza no nandraisana izany fanapahan-kevitra izany tamin’ireny fiakaran’ny saran-dàlana teto an-drenivohitra ireny.
Hita taratra amin’ity fanapahan-kevitra noraisin’ny governemanta ity ny fomba fitantanana eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Vahaolana vonjitavan’andro avokoa no raisina rehefa misy zava-mitranga. Tsy mahafoana ny tena olana anefa fa vetivety ihany dia iny mipoitra indray. Raha ny resaka fiakaran’ny saran-dàlana, volana vitsy fotsiny no nanelanelana ny fiakaran’izany teto an-drenivohitra. Ho an’ny kaoperativa sasany tsy nampijanona ny saran-dàlany ho 400 ariary, efa saika tsy misy manao tapa-dàlana intsony amin’izao fotoana izao.